Dowlada Ingiriiska oo dhismaha Ciidan Soomaaliyeed ugu yaboohi doonta £21 Milyan , iyo Qorshahaan cusub ee dhismaha Ciidan Soomaaliyeed | puntlandi.com
Monday, May 1st, 2017 | Posted by Pi
Dowlada Ingiriiska oo dhismaha Ciidan Soomaaliyeed ugu yaboohi doonta £21 Milyan , iyo Qorshahaan cusub ee dhismaha Ciidan Soomaaliyeed
Shirka Soomaaliya ee 11 Bishaan Maajo ka furmi doona London ayaa ajandihiisa ugu weyn wuxuu yahay dhismaha Ciidanka Soomaaliya.
Dowlada Ingiriiska ayaa Soomaaliya ku taageeraysa Qorshaan lagu dhisayo Ciidanka Soomaaliya, Sida Puntlandi warka ku hayo Dowlada Ingiriiska oo ka duulaysa heshiiskii dhowaan ay wada gaareen Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha xubnahaka ah ee ku aadanaa dhismaha Ciidanka, ayaa Ingiriisku waxay Shirka London ku dhawaaqi doonaan iney ku taageerayaan dhismaha Ciidanka Soomaaliya £21 milyan oo Pound oo dheeraada, oo ka baxsan taageerada kale ee UK ku kaalmeyso Soomaaliya.
Qorshahaan cusub ee loogu dhisayo Ciidanka Soomaaliya ayaa ka duwanaan doona Qorshayaashii horey u kashifmey ee Dowladihii hore ee Soomaaliya ay ku dalban jireen in lagu taageero dhismaha Ciidanka kasoo dhowr jeer la musuqmaasuqay lacagihii lagu bilaabi lahaa dhismaha Ciidanka.
Sida Puntlandi xogta ku hayo Qorshahaan cusub wuxuu noqon doonaa oo loo dajiyey qaab waadaxa ah oo ay qaybo badan ay wax ka maareyn doonaan dhismaha Ciidanka..
waxaa qayb ka ah Qorshahaan Dowlada Igiriiska oo dhaqaale badan bixineysa.
Dowlada Emaaraatka Carabta oo iyana dhaqaalaha wax ka bixineysa, Khibradna u leh dhismaha Ciidanka Soomaaliya, horayna uga caawiyey qaar ka mid ah Maamul Goboleedyada iyo Dowlada dhexe dhismaha Ciidanka.
Dowlada Maraykanka ayaa iyana taagersan Qorshahaan waxayna sheegeen iney uga qayb qaadanayaan Dhinac dhaqaale iyo mid tababaridba.
Dowladaha Itooboya iyo Kenya ayaa iyana ka qaybqaadanaya tababarida Ciidanka Soomaaliya oo waxay ku yaboohoon iyana iney diyaar layihiin in Akadeemiyooyinkooda Ciidanka ay u furaan Ciidanka Soomaaliya iney ku qaataan Koorsooyin iyo tababarba.
Maamul Goboleedyada iyo Dowlada dhexe ee Soomaaliya ayaa fure loo siiyey iney si wada jir ah usoo dajiyaan nidaamka iyo Ciidanka Loo dhisayo Soomaaliya si meesha looga saaro Maleeshiyo beeleedyada gashan tuutaha Ciidanka, loona helo Ciidan tayo leh oo Mmatali kara Soomaaliya.
Qorshaan cusub wuxuu yimid kadib markii Beesha Caalamka iyo Shacabka Soomaaliyeedba ay ku khasaareen Kumayaal Ciidan ah oo Soomaaliya Gudeheeda iyo dibadeedaba lagusoo tababaray iyo musuq maasuq baaxadweyn oo lagusameeyey Dhaqaale badan oo Ciidanka loogu talagalay.